Isa MAME4iOS isina jailbreak neXcode | IPhone nhau
Isa MAME4iOS isina jailbreak neXcode
Semumwe munhu akatamba arcade michina kubva kuma90s, imwe yeanyorerwo andinogara ndichida kuve nawo pane angu maIOS zvishandiso ndiye emulator MAME4iOS. Muna 2012, Gridlee, iyo yakavanzika emulator yemutambo usina mhosva (uye wakashata), akaiswa kuApp Store asi, sezvanga zvichitarisirwa, Apple akaibvisa mumaawa mashoma ekuigamuchira. Ini handikwanise kurangarira kuti sei, asi ndakarasa iyo .ipa faira, saka handikwanise kuiisa zvakare Kubva ipapo, kana ndichida kutamba MAME4iOS ndinofanira kuenda kujeri kupaza kana kuisa imwe yemhando dzakasiyana dzinotenderera (uye kazhinji dzisingashande) paInternet.
Ndanga ndichitevedzera chirongwa ichi kwenguva yakati uye musiki waro, Seleuco, anoita kunge akachiisa parutivi. Nhau dzakanaka ndedzekuti Lesbird iri kuenderera mberi nechirongwa chaSeleuco. Ini ichangobva kuiswa kurodha kuMAME4iOS yekushandisa pasina jailbreak, asi yanga isinga shande pane zvishandiso zvitsva zvinomhanya iOS 9.2.1. Nhasi aburitsa vhezheni inogadzirisa matambudziko uye hongu, inoshanda! Muchirongwa ichi tinokuratidza maitiro ekuisa MAME4iOS pane yako kifaa, hapana jailbreak uye nesiginecha yako, nekudaro, kunze kwekunge Apple ikadzosa chitupa chako, chimwe chinhu chisingaite nekuti hachisi chemubatanidzwa, unogona kuchishandisa kusvikira wadzorera chako kifaa.
1 Maitiro ekuisa MAME4iOS isina jailbreak
2 Maitiro ekuwedzera maROM kuMAME4iOS
Maitiro ekuisa MAME4iOS isina jailbreak
Xcode ine yakabatana yekuvandudza account. Kana iwe usingazive sei, shanya IZVI ZVINONZI.
Iyo MAME4iOS kodhi iwe yaunogona kuwana kubva ku Lesbird peji. kana nekudzvanya HERE.
Zvingaite sezvakaoma, asi uchaona kuti hazvisi. Usatya, nekuti hausi mune chero njodzi. Izvo zvinoitwa nekutevera aya matanho:
Isu tinoburitsa faira ratakaburitsa kubva papeji reLesbird.
Mukati mefaira iro ratinoita pane faira rinonzi libmamevv.a. Isu tinosunungura iyo faira uye ndokuisiya mune imwechete folda (ndokuti, padhuze nefaira libmamearmv.a.a).
Izvo hazvina kundishandira ndisina kuburitsa iyo libmamearm7.a faira
Ngatiendei kumenyu Faira / Vhura uye sarudza iyo faira MAME4iOS.xcodeproj zviri munzira / MAME4iOSReloaded / Xcode / MAME4iOS.
Muhwindo rinovhura, isu tinofanirwa kutora matanho matatu:
Tinosarudza chishandiso chatiri kuda kuisa MAME4iOS.
Isu tinoshandura chinongedzo. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kushandura zita pakati "com." uye ".mame4ios". Mune yangu nyaya, ndakatumidza zita rekuti "SrAparicio".
Uye mune iyo tebhu chikwata Isu tinowedzera yedu yekuvandudza account iyo yatichava nayo / ichave takagadzira sezvakatsanangurwa mune izvo zvinodiwa.
Nhanho inotevera ndeye kudzvanya pane yekutamba katatu. Iko kuruboshwe kwedanho 1 mumufananidzo uri pamusoro.
Isu tinoyambuka minwe yedu uye tinotarisira kuti hatizowana chero zvikanganiso.
Kana zvese zvikafamba mushe, tichaona MAME4iOS mu chidzitiro chemba ye iPhone yedu, iPod Kubata kana iPad senge chero chimwe chirongwa chatinotora kubva kuApp Store. Iye zvino tinoda nhanho yekupedzisira (iyo yandifungisa naSamuel. Ndatenda): iri yekuudza mudziyo wedu kuti uvimbe newakagadzira iyo yakaisa iyo App. Zvirongwa / General / Chishandiso manejimendi uye tinozvivimba pachedu, izvo zvichave mune chimiro icho email yedu ichave nacho. Iyi nhanho ichaitwa chete kekutanga nguva yatinokanda kunyorera neXcode. Zvino, kunakidzwa.
Maitiro ekuwedzera maROM kuMAME4iOS
Sezvaungave watofungidzira, Hatigone kupa kana mawebhusaiti kwatinowana mitambo kana iyo mitambo pachayo. Wese munhu anofanirwa kuve neake backups akachengetedzwa, senge yangu nyaya yekuti ini ndinotova nefaira rakagadzirirwa pamwe nemitambo iyo yandinoda kuve nayo pane yangu iPhone kana iPad.
Kuwedzera maROM kuMAME4iOS kuri nyore kwazvo. Pazasi iwe watsanangura maitiro ekuwedzera iyo mitambo ne iTunes asi, sekusimbisa kwawakaitawo inoshanda neIFunbox uye iExplorer. Tichazviita zvinotevera:
Zvine musoro, tinovhura iTunes.
MuTunes, isu tinotora matanho mana:
Tinodzvanya pane icon-yakaita icon uye sarudza yedu iPhone, iPod Kubata kana iPad.
Kuruboshwe, tinobaya maApplication.
Kurudyi, tinotsvedza uye tinotsvaga MAME4iOS. Pano iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti ndiyo yechipiri ikholamu yekushandisa, pazasi painoti Yakagovaniswa mafaera ndipo patinogona kuwedzera zvinyorwa kune zvimwe zvinoshandiswa.
Pakupedzisira, tinodhonza maROM mubhokisi kurudyi.
Iye zvino tinoenda kune iyo iPhone, isu tinovhura MAME4iOS uye iyo mitambo inozotakura otomatiki. Nguva inotevera patinoenda kurodha ROM muTunes tichaona kuti vamwe vanyangarika, asi zvakajairika. Ivo vakangoendeswa chete kune inoenderana dhairekitori.
Uye ndizvozvo. Nakidzwa neyekare arcade mitambo. Ah, kana mumwe akakundikana iwe, ungatofanira wedzera imwe BIOS, izvo zvaunofanira kuita kutsvaga kweInternet, chimwe chinhu senge «mame zvese bios». Kana chimwe chinhu chisingashande kwauri, usazeze kupindura. Ini handisi mugadziri uye handina kana chekuita nechirongwa ichi (ndinogona kuchidudzira, hongu), asi zvakandishandira. Chero zvazvingaitika, kana iwe ukaita zvinhu sekutsanangura kwandinoita, zvinofanirwa kushanda. Rombo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Isa MAME4iOS isina jailbreak neXcode
Ndatenda gwaro, izvozvi ndinotanga kushanda
Pablo, ndinoita sei unzip libmamearmv7.a. neiyo betterzip ini handigone kana kuti haina kundiziva. Ndatenda
Mhoroi samuel. Kuti unzip, gadza Iyo Unarchiver uye kanganwa nezve zvese zvimwe. Ini ndinofunga ndanga ndichiishandisa sezvo ini ndichishandisa Mac uye hazviwanzo kutadza.
Yakakwana, ndatenda neiyo unzipping app, ini ndanga ndichipenga ne betterzip.
Iwe unofanirwa kuwedzera nhanho kune idzva, nhanho 8. Iwe unofanirwa kupa mvumo kune yako account kumhanyisa iyo app. isina kusainwa. Izvi zviri mu: Zvirongwa / zvakajairika / manejimendi manejimendi
Iye zvino ndiri kuenda kuzotevera bhuku rekuisa mitambo
Yakashanda kwauri here?
Wareva izvo kuti ini ndoda kuisa izvo, kana yambiro ikasaratidzika kuti inogona kuve isingavimbike mugadziri. Ini ndinowedzera. Ndatenda nekunyora.
ehe, zvese zvakanaka. Ini ndakaisa makamuri ane ifunbox, ndinoona ichinyatsogadzikana kupfuura iTunes. Iye zvino ini ndine icade uye ndiri kuisa iyo runyorwa rwevanofarira. Zvese zvinhu zvakakwana, unogona kufungidzira chishuwo chandaifanira kuve nacho mame pane iyo iPad zvakare.
Pablo, ndatenda zvikuru. Basa rakanaka kwazvo raunoita.
Ini ndaisa maRoms neexplorer.va akakwana
Ini ndashandura iyo dzidziso ndichiwedzera ruzivo rwako. Kutenda nemanotsi.
Ini ndinofungidzira kuti kumhanya xcode iwe unoda Mac, hazvigoneke kuti umhanye nePC ndinofungidzira.
Mhoro Jose. Ndizvozvo, Xcode inongowanikwa chete kuMac.
Ini handisi kuwana "Dhijitari Management" sarudzo mukati me "General" uye zvinondipa zvikanganiso kana ndichizvinyora, kare ini ndanga ndaisa iyo "Mame4ios" app iyo Apple yakasaina kumashure muzuva, asi ini handina kukwanisa kuwedzera chero maROM iyo, nekuti Apple haisisiri kusaina, ndinogona here kugadzirisa iyo yekare .ipa faira ndobva ndasaina neakaundi account yangu?
Pindura kune iakro
Mhoroi, iakro. Kana ikakundikana kuumbiridza, haina kuiswa uye kana isina kuiswa, haugone kutora manejimendi. Iwe waita zvese sekutsanangurwa? Iwe une account yekuvandudza yakabatanidzwa, unoisunungura iyo faira uye nezvimwe zvese?
Iyo .ipa haigone kushandiswa kana yagadzirwa. Kwete izvo zvandinoziva.
Ehe, ini ndakatevera zvese sekutsanangurwa kwazviri kuti ndisakanganisa, asi zvakandipa kukanganisa kana ndichizvinyora, rombo rakaipa nechishuwo chandaifanira kuve naMame zvakare. Tichafanirwa kumirira kuti tione kana paine dzimwe nzira dzisina jailbrea. Ndatenda.
Iwe unofanirwa kusunungura mafaera maviri: iyo yatakatora uye imwe mukati inonzi libmamearmv7.a. Wakazarura iyo zvakare here?
Kana ndikazviita nemafaira maviri, iro rekutanga uye iro randaive naro mukati.
Zvine musoro, chimwe chinhu chakakanganisika, asi kubva pano handisi kuziva kuti chii. Ini ndaizoedza kudhawunirodha iyo faira zvakare kuti ndione kana zvaitika zvisizvo. Kana kuti pamwe chimwe chinhu chakashatiswa pawakaisunungura. Ndakazviita kaviri uye zvakashanda mushe.
Mhoroi, Pablo. Mupiro wako wakanaka. Handina MAC. Zvakaoma kwazvo kuisa vmware ine IOS uye kuwedzera iyo Xcode mukati? kana ndangopedza izvozvo .... ndinofanira kuita zvakafanana neiyo iTunes kuisa maROM?
Kuenderera mberi ... Iko hakuna sarudzo yekuti mumwe munhu aunganidze iyo mame pane yake IOS uye woiburitsa, saka ini ndinoitora uye ndoiisa pane yangu iphone? Ndotenda zvikuru!
Mhoro Max. Edza IZVI http://www.avoiderrors.net/install-os-x-el-capitan-10-11-final-virtualbox/
zvinondipa kukanganisa, inoti iOS 10.1 haienderane ndine xcode 8, chero mazano
pane vhezheni yakagadziridzwa yemame iyo inogona kushandiswa kushandisa mfi mirairo iri pane iyo github peji
Victor daniel garza akadaro
Ini ndinoita nhanho dzese asi pandakarova museve ndinowana iyi mhosho.
iyo faira «MAME4IOS» haina kukwanisa kuvhurwa nekuti hauna mvumo yekuiona.
kuti utarise kana kushandura mvumo, sarudza chinhu chiri mutsvaga uye sarudza faira> Get -info.
asi handisi kuwana iyo faira, ndibatsireiwo .. ..
Pindura kuna Victor Daniel Garza
PressUnlock: iyo tweak yekuvhura iyo iPhone nenhamba imwe chete
WhatsApp ikozvino inobvumidza iwe kutumira zvinyorwa zvePDF kubva kuIOS